Iphampu Yokukhipha Insipho Yase-China Yezimboni I-Plastiki Yangokwezifiso Isikulufa Iphampu Yokugcotshwa Kwempahla Yokukhiqiza Izandla Nefekthri | Yongxiang
I-Industrial Soap Dispenser Pump Custom Plastic Screw Up Lotion Pump Yokugeza Izandla
Igama lomkhiqizo: I-Screw Lotion Pump
Igama lomkhiqizo: YuYao Chenfei
Inombolo yemodeli: CY102-2
Usayizi: 24/410 28/410
Ukuvalwa: I-Aluminum ye-Ribber Smooth
Ubude beshubhu: Ishubhu eyenziwe ngokwezifiso
I-MOQ: 10000 Pcs
Isilinganiso sokukhipha: 1.6-2.0ml/T
Isampula: Ihlinzekwa Ngokukhululeka
Ukusetshenziswa: ngebhodlela lepulasitiki noma ibhodlela lengilazi le-lotion dispenser
Izicelo: Isetshenziselwa uketshezi lokugeza izandla, insipho ewuketshezi, ishampoo, i-hair conditioner, ijeli yokugeza, njll.
U-Yuyao Chenfei—Umkhiqizi ochwepheshe uzibandakanya ekupakisheni okufanayo kwesaluni yobuhle, imithi kanye nemikhiqizo yokuhuqa
Lawa maphampu okugcoba enzelwe amabhodlela epompo yokugcoba noma ama-dispenser futhi anemibala eyahlukene. Zilungele izinto ezibonakalayo ezibonakalayo, njengezigcobo, insipho ewuketshezi, nama-shampoos, kanye nemithi, izimonyo, neminye imikhiqizo yezempilo nobuhle.
Iphelele ngezinto ezibonakalayo
Amaphampu angu-24/410 angase angalingani zonke izintamo
Ikhipha i-2mL nge-stroke ngayinye
I-Plunger ikhiyelwe ukuthunyelwa nokugcinwa
Amaphampu alotion enziwe nge-polypropylene ane-slot yokukhiya ngaphakathi kwekepisi futhi eza athunyelwe kuwe esendaweni ekhiyiwe, elungele ukusetshenziswa ngqo esitsheni sakho. Amaphampu okugcoba avumela ukuthi imikhiqizo ephezulu ye-viscosity, njengama-lotions nensipho ewuketshezi, ikhishwe kalula. Amaphampu okugcoba angasetshenziswa ngengilazi, ipulasitiki, noma iziqukathi zensimbi, futhi akhiphe kahle u-0.5 ml womkhiqizo ngokushaywa ngakunye. Amaphampu okugcoba ayatholakala kuwe ngosayizi wekepisi engu-24/410 anobude obuhlukahlukene beshubhu lokucwilisa.
Amaphampu e-Lotion anikeza i-viscosity ephakeme kanye namakhono okuqala emikhiqizweni eminingana okuhlanganisa okhilimu, okokugcoba, ukunakekelwa kwezinwele, insipho ewuketshezi kanye, vele, nezinto zokugcoba. Amaphampu kaloshini ayatholakala kusukela ku-1.2cc ejwayelekile ukuya ku-30cc, okuhlanganisa nokukhethwa kwamaphampu avikela umkhiqizo ekungeneni kwamanzi. Amaphampu okugcoba asetshenziswe ekunakekelweni kwezinwele, ukunakekelwa komuntu siqu, ukunakekelwa kwezilwane ezifuywayo, izimboni zezimoto nezokunakekelwa kwasekhaya.
1: ukuthunyelwa okusheshayo, ngenxa yemishini ezenzakalelayo, ukulinganisa umthamo, ukuthunyelwa okusheshayo.
2: izinga elihle, ukugadwa okuqinile komnyango wokulawula ikhwalithi, ukuqinisekisa ikhwalithi
3: intengo enengqondo, isitshalo sokukhiqiza isikali, ukukhiqizwa okuzenzakalelayo, kunciphisa kakhulu izindleko zokukhiqiza, ukuqinisekisa ukusebenza kwezindleko zemikhiqizo.
4: Amaphampu ethu okugcoba ayaqondiswa futhi aqashwe ngaphansi kwe-ISO9001. Ukuvikelwa kwemvelo okuphezulu okubonakalayo kwempahla eluhlaza, okuhlala isikhathi eside, okubucayi kanye nekhabhinethi.
Okwedlule: Left-Right Lock Lotion Pump Factory intengo 28/400 28/410 28/415 Plastic Lotion Pump liquid insipho yokugeza izandla I-Dispenser futha cap
Olandelayo: 18/410 20/410 24/410 360 Degree Spray Nozzle Perfume Atomizer plastic fine inkungu sprayer nedustcap ecacile yebhodlela lezimonyo
Iphampu ye-Lotion Enkulu
Ibhodlela Lokuthambisa Ngengilazi Elinompompi
Iphampu Lokukhiya Kwesokudla Kwesokudla
Iphampu ye-Lotion Lotion Dispenser ende
Ibhodlela Lokuthambisa Ngephampu
Ibhodlela lePump Lotion
Ibhodlela Lepulasitiki Elinophampu Lokuthambisa
I-Pump Bottle Lotion
Ibhodlela Lokuthambisa Iphampu
Isikulufa Phansi Lotion Pump
Left-Right Lock Lotion Pump Factory intengo 28/40...